कथा : कलाको विश्वविद्यालय – MySansar
कथा : कलाको विश्वविद्यालय
Posted on August 31, 2013 August 31, 2013 by mysansar
त्यति परसम्म जानै पर्दैन, हाम्रो आफ्नै जीवनक्रमलाई पछाडि फर्की हेरेमात्र पनि गनेर नभ्याइने परिवर्तनहरु भेटिन्छन् । संचार र चिकित्सा क्षेत्रमा त झन प्रत्येक दिन जसो बिकास र आबिश्कारको बिष्फोटन नै भएको छ भन्दा पनि अत्युक्ति हुँदैन। उड्ने कारका बिक्रिकक्षहरु खुलिसके । कम्पुटर स्क्रिनको एक छुवाईले भान्सामा खाना पाकी डाइनिंग टेबलमा खाना तयारी　अबस्थामा हुन थाल्यो । दिमागमा एक शुस्म चिप्स राखेर सिकेको कुनै पनि कुरा मान्छेले आफ्नो जीवनकालभरि सम्झिन सक्छ अब । आइपीएस कोषबाट चाहिएका शरीरका अङ्गहरु बनाउन मिल्ने भयो । हुँदाहुँदा रगतको परीक्षणबाट मान्छेको आयु र उसलाई भविष्यमा लाग्न सक्ने रोग समेत बताउन सकिने भैसक्यो ।
शिक्षा क्षेत्रमा पनि भएका छन् सानातिना परिवर्तनहरु । “लौरो फाल, बच्चा बिगार” बदलिएर “माया गर बच्चा बनाऊ, जे मन गर्छ त्यही गर्न देऊ” भएको छ । भाषा शिक्षणमा “नियम पढाऊ”-“खेल खेलाऊ”-मा र “शुद्ध बोल”-“गल्ती बोल तर बोल”-मा रुपान्तरित भएका छन् ।
मन्जुलले असल शिक्षक बन्ने सपना बोकेको छ यो बखत । ब्यबहारमा उतार्न र खारिन बाँकी नै भए पनि पैंतालीस दिने अंग्रेजी अभ्यास शिक्षणमा आएको उसले राम्ररी बुझेको छ आधुनिक शिक्षा र शिक्षणको सिधान्त । प्रायः यो कक्षाको बिषय शिक्षकको सल्लाह अनुसार अध्यापन गर्छ, अक्कल झुक्कल उनका कक्षाहरु अबलोकन गर्छ र अभ्यास अबस्थामा विद्यार्थीहरुलाई सघाउँछ । यी बिषय शिक्षक पेसामा प्रबीण छन् तर अल्लि पुरानो सोँचका । बिद्यार्थीलाई माया त गर्छन् साथै आफू मास्टर हुँ भन्ने कुरा पनि बिर्सिसकेका छैनन्।
मन्जुलको अभ्यास शिक्षणको दशौँ दिन मोहन सरले अध्यापन गर्ने दिन पर्यो । उनले बिद्यार्थीलाई वार्म-अप गराए, आफूले त्यो दिन पढाउने पाठ प्रस्तुत गरे र अभ्यास अबस्थामा विद्यार्थीहरुलाई कार्य-पत्रक दिइसकेपछि विभिन्न उप-समुहमा बाँढे अनि अभ्यास राम्रोसंग भए नभएको निश्चयताको लागि केही समुहलाई अफूले अवलोकन गरे भने केही समुहलाई अवलोकन गर्न मन्जुललाई अह्राए ।
बिद्यार्थी जीवन नै के हुन्छ कुन्नि, विश्वविद्यालय तहसम्मै शिक्षकले भनेबमोजिमका सत-प्रतिशत कुराहरु गर्ने कोही पनि बिद्यार्थी हुदैनन् भन्दा बढाईचढाई हुँदैन । त्यसमाथि पनि यी बिधार्थी त मात्र कक्षा नौ मा पढ्ने किशोर किशोरी न थिए ! कतिपयले कार्य-पत्रकले मुख छोपीछोपी अन्य कुरा गरिरहेको मन्जुलले देख्यो तथापी केही भनेन बरु एक जोडीलाई बडो उत्सुकताका साथ नजानिदो गरी हेरिरह्यो । तिनीहरुको नाम उसलाई याद थिएन । कुराकानीको बिषय बस्तु प्रति चासो पनि थिएन तदपि उसले ती मध्येकी एउटी बिद्यार्थीका, खासगरी अनुहार र हातका, हरेक हाउभाउ आफ्नै आँखाले खिची, दर्ज गरी, आफ्नो मानसपटलमा अवतरण गराइरह्यो । त्यो घन्टी सिद्धिएपछि उनैलाई सोधेर थाहा पायो की उनको नाम स्वेता रहेछ ।
मंजुलको नारीहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण एकदमै असल छ । कुनै पनि नारीहरुलाई नराम्रा ठान्दैन र भन्दैन ऊ । आहा कस्तो उत्तम र उन्नत सोँच ! सुन्दरतामा धनात्मकता ऋणात्मकता हुन सक्छ तर नारीहरु सबै सुन्दर हुन्छन भन्ने मान्यता राख्ने अधिकतम बिकशित सोँच छ उसको । हुनपनि नारीहरु सुन्दरताका सच्चा प्रतिमूर्ति न हुन् । को चाहिँ राम्रो हुँदैन ? अनि के मात्र राम्रो हुँदैन उनीहरुको ?
मुख्य बिषय अंग्रेजी शिक्षण पद्दति भए पनि ऐच्छिक बिषय भाषा तथा साहित्य लिएर पढेको मन्जुलले राम्ररी बुझेको छ नारी र नारी अङ्ग सौन्दर्यताका कुराहरु । आस्वस्त छ परिभाषाबाट । रेसमी चुल्ठो, ठूलाठूला आँखा, पिपलपाते ओठ, पुष्ट छाती, बारुले कम्मर, बाटुलो नितम्ब, रामतोरिया औंला, पिउरी जस्ता हात, सुडौला तिग्रा, चन्द्रमा हाँसो, चन्चेले बानी, लजालु स्वभाब, ललिते बोली, मायालु हेराइ लगायतका आम जिब्रोका भाषा मात्र होइन की सुमुख, कबरी, कटिया, कनपट, कतली, कँडेउल, कटी, वक्ष, अनङ्ग, नयनाभिराम, शोड़शि आदिआदि नारी अङ्गका साहित्यिक उपमा पनि जानेको छ राम्रोसंग प्रयोग गर्न । त्यसैले त दर्ज गरेको थियो उसले स्वेताका हात मुखका हाउभाउ कटाक्षहरु आफू भित्र ।
हुन त मन्जुल बाहिस बर्षे अविवाहित लक्का जवान हो अपितु यौन उन्माद वा प्यास दुबैले हेरेको होइन उसले स्वेतालाई । जीवन साथी बनाउने रुमानी सपनाले पनि होइन । सुन्दरताको धर्म देखिनु हो देखियो अनि चक्षुको धर्म देख्नु हो देख्यो । स्वेताले देखाई, मन्जुलले देख्यो । नगर्नु केही गरेनन् दुबैले । आखिर जनेन्द्रिय देखाउने र हेर्ने गरेका त होइनन् उनीहरुले । त्यसमाथि पनि दुबैले गर्दै गरेको कुरा अर्कोलाई थाहा थिएन ।
अर्थ छ र बनाइएका छन् इन्द्रियहरु । ज्ञानशक्ति र कर्मशक्तिका मानवीय अङ्ग नाक, कान, आँखा, जिब्रो र छालाले गोचर गर्नु पर्ने कुरा गर्न सकेनन् या गरेनन भने त जीवन र जगतका धेरै कुराहरु गोलमाल भैहाल्छन् नि !
त्यो दिन घर आएर मन्जुलले एकान्तमा हेर्न थाल्यो मोहन सरले बिहानको कक्षामा अभ्यास गराउँदाका स्वेताका केही हाउभाउहरु ।
धुँधली र पातली छे स्वेता । कपाल घाँटीसम्मको छोटो छ होला पूरै फिँजायो भने । सिधा अगाडिको भाग आँखीभौ ढाक्ने गरी कोरेकी छ अनि कंचेटनिर दुई वटा लामा लुर्का झुण्ड्याएकी छ झींगुरका सींग जस्तै बनाएर । पछाडिपट्टि रबर ब्यान्डले बाँधेको केश न्यौरेमुसाको पुछर जस्तो होइन की टाउको जस्तो देखिएको छ । गर्दनमा मेरु दण्डको हड्डी अलि ठूलो देखिएको छ । अनुहार ठीकैको छ गालामा कतै कतै राता बिबिरा छन् । चिउँडो खेलकूँद खेल्दा लडेर ददारिएको छ तर ददार नै सृंगार गरेझैँ सुहाएको छ । आँखा राम्रै छन् तर मृग नयन भने होइनन् । निर्धारित विद्यालय पोशाक सेतो कमिज लगाएकी छ, वक्षस्थल त्यति पुस्ट देखिएका छैनन् । विद्यालय पोसाककै निलो रंगको ठीकै कस्सिएको प्यान्ट्स लगाएकी छ । छोटा सेता मोजा र केही दोबारेको प्यान्ट्स बीचमा गोलिगाँठा माथि कफी काला नलीखुट्टा देखिएका छन् । समग्रमा धनात्मक राम्री नै लाग्छ उसलाई स्वेता।
अपितु उक्त पाठ अभ्यास अबस्थाको पुगनपुग दश मिनेटको समयमा स्वेताको अनुहारमा आएका सुन्दर बिबिधताबाट ऊ यति मन्त्रमुग्द भयो की उसको बाइसबर्षे जीवनकालमा यस्तो सुन्दरता सपनामा बिपनामा, यथार्थमा परिकल्पनामा कहीं कतै देखेको थिएन । के देख्दै थियो ऊ आफै चकित थियो !
कुरा को चुरो र प्रसंगको के थियो कुन्नि ! स्वेताका आँखा एक फन्को फनक्क नाँचे मंजुल्को अगाडि । अनि त दौडिरहेको कालो बादलले छोपेको सूर्य मिलिक्क देखिएझैँ अनुहार झलमल भयो । नाक कुच्चिएर माथिपट्टि मसिना मुज्जा परे । दुवै गालामा सप्तमीका दुई चन्द्र एकैसाथ मुख तर्फ फर्किएर उदाएर । ओंठ उघ्रिएर सुन्दर र पिपल पात बने । देखिने जति दाँत एकाएक टम्म हार मिलेर बसे । टाउको बारम्बार तलमाथि गर्यो । छाती थल्क्यो । घाँटी नजिकका दुइटा हड्डी उक्से । गर्दनमा उठेको मेरुदण्डको गोलो हड्डी लुक्यो ।
यसै बीचमा कुराको प्रसंग बदलियो अथवा नयाँ अध्याय शुरु भयो क्यार एक पटकमात्र छिटो जोडले दुवै आँखा चिम्म गरी, खोली र खोल्दा चट्यांग पारी । दायाँ हातलाई पंखा बनाएर चार पाँच पटक घाँटीमा हम्की अनि तुरुन्तै झींगुरसींगे कपालका धर्सालाई चोर औँला र बुढी औंलाले बिस्तारै दुई तीन पटक तानेर बटारी। हाँसोको पर्रा छुट्यो । दुवै हातले नाक र मुख छोपी । टाउको घुमाएर आँखा बलढेंग्राका गेडा जस्तै बनाउँदै एक पटक पुलुक्क मोहन सर तर्फ हेरी । उनी टाढै भएको निश्चित भएपछि बार्तालाप फेरि जारी भयो । वक्ष चस्माको तलको बीट पहिला पछाडिपट्टिबाट अनि फेरि अगाडिपट्टिबाट तानी । कुमनिर अलिकति फिता देखिएको थियो छोपी । निहुरिएर आफ्नो छाती यस्सो हेरी । कमिजको घाँटी निरको एउटा टाँक बढी खुलेको मौका छोपी भित्रको रंगीन र बुट्टादार बस्त्रले बाहिरी संसार नियाल्दै थियो, त्यसका आँखा बन्द गर्दिई । साथीले के कुरा भनी कुन्नि कुराको सिलसिलामा गोल्याएको आफ्नो कार्य-पत्रकले साथीलाई टाउकोमा प्याट हानी । फेरि गल्की र तुरुन्तै मुखमा दायाँ हातले बाबाबाबा बनाई । फेरि के थपियो कुन्नि मस्किँदै हल्लिहल्ली नाकैनिर दुवै हात लगेर ताली पिटी । यत्तिकैमा मोहन सरले कक्षा समय सकिएको कुरा सुनाए । स्वेताहरुले कुरा बन्द गरे भने मन्जुल सामान्य अवस्थामा फर्क्यो । स्वेता फेरि धुँधली नै देखिई ।
एक पटक मंजुल्ले आफैलाई प्रश्न गर्यो । म भविष्यको शिक्षक, कर्णधारको शिक्षक, भविष्यका राष्ट्र प्रमुखको शिक्षक, समाजको दर्पण, मैले हेर्नु र देख्नुमा केही अमिल्दो छ, गल्ती छ ? छैन भन्ने उत्तरमा आफैले आफैलाई बिस्वस्त पार्यो । किनकी उसले कुनै नराम्रो दृष्टिकोणले हेरेको थिएन अनि नारीप्रति सम्मान घटाएको पनि थिएन ।
उसको आँखा सद्दे छन् त्यसैले देख्यो । सुन्दर बस्तुमा सबैका आँखा पर्छन नै ! कहाँ भएका छन र कुरूपहरुका प्रतियोगिता ? कहाँ लेखिएका र गाइएका छन र असुन्दरहरुका गीत-गज़लहरु ? कुन चित्रकारले क्यानभासमा भरेको छ र नराम्राहरुका चित्र र मूर्तिहरु ? कुन चलचित्रमा छानिन्छन र नाराम्राहरु नायक र नायिकामा ?
मन्जुलले आनीको गीत सम्झ्यो, अनि त्यो दिनदेखि आफ्ना आँखालाई झन राम्रा फूल बनाएर अझै व्यापक दृष्टिकोणले हेर्न थाल्यो नारीहरुलाई ।
चार बर्ग थिए यो स्कूलको नौ कक्षामा ! बिषय शिक्षण पद्दति भएकोले हरेक बर्गमा मोहन सरसँगै गएर अध्यापन वा अवलोकन गर्नु पर्थ्यो मन्जुलले । भोलिपल्टको अर्को कक्षामा पनि मोहन सरले उही तरिकाले पढाई गरे । फरक के थियो भने अभ्यास अवस्थामा कार्य-पत्रकको सट्टा समुहलाई प्रश्न सोध्ने खेल थियो । यो कक्षामा अलि धेरै पटक गैसकेकोले केही बिद्यार्थीका नाम याद थियो उसलाई । सेली एकदम गोरी, सिल्की कपाल, ठुल्ठुला आँखा, फत्रेका तार झैँ परेला, सिनित्त बनाएर मिलाएको आँखीभौं, सोक्रेटस्को जस्तो नाक, पुष्ट छाती भएकी विछट्टै राम्री र आकर्षक शरीर भएकी केटी थिई यो कक्षामा । पढाइ साहित हरेक क्रियाकलापमा ज्याद्री ।
खेल शुरु भयो । हरेक उप-समुह मध्ये सबभन्दा पहिले हात सेलीले उठाई । प्रश्नको उत्तर मिलेपछि विनबल्डन टेनिसमा नम्बर ल्याउँदा सरापौवाले झैँ मुट्ठी कंसी हात माथि लगेर थर्काउँदै आफू बलियो भएको संकेत गरी । औधि प्रशन्न मुद्रामा छे ऊ । मिलेका दाँत, राता सुन्दर ओंठ देखाउंदै हाँसी । उफ्रे जस्तै गरी । राम्रा पुष्ट वक्षलाई झड्कारी, कोक्रोमा सुताएको बच्चालाई चुनु गराउँदाझैँ दुई तिर हल्लाई, थल्काइ, यही रिदममा गोलो र आकर्षक नितम्वलाई उफारी, थर्काई । अर्ध बसेउठेको अबस्थामा आफ्नो समुहका साथीहरुको उत्तर पढ्न तन्किँदै थिई, टुप्पैको भरमा समबेदना नै पलायो होला जस्तै गरी स्तनहरु उसको डेस्कमा लतारिए । तल भित्र लगाएको रंगीन थंगको माथिल्लो भाग गोरो बारुले कम्मरमा देखियो । कम्मरमा आधा दर्जन जति मेरुदण्डका मसिना गोला हड्डी देखिए । नितम्बको बिच भागमा प्यान्ट्स बाहिरबाटै थंगले दुख्ने गरी कोमल फिलामा डाम पर्ने गरी डसेको प्रस्ट देखियो । मोहन सरले आज पनि समय सकिएको संकेत गरे । मन्जुल झल्यास्स भयो । सेली उस्तै राम्री देख्यो ।
फेरि एक पटक आफैलाई प्रश्न गर्न बाध्य भयो मन्जुल । अरु शिक्षकको बारेमा सोंच्यो। पेन्सन पाकुन्जेल यस्तै बिद्यार्थीसँग समय व्यतित गर्ने शिक्षकहरुले पक्कै पनि नारी सुन्दरता त देख्छन होला ! देखे पछि पक्कै पनि आँखा चिम्लंदैनन होला, मुन्टो बटारेर अर्को तर्फ फर्किन्नन् होला ! मान्छे यात्रा गर्दा पनि प्राकृतिक रमणीय स्थल मै जान्छ नि, को जान्छ र मसानघाटको यात्रा गर्न, को जान्छ र बगर हेर्न ! कस्ले नराम्रो फूलको माला गाँस्छ ? कसले नराम्रो फूल वा खोटो बलि मन्दिरमा चढाउँछ र ? नदेख्ने, नहेर्ने हो भने सुन्दरताको भेद कसरी पाउन सकिन्छ त जीवनमा ? सुन्दरताको के अर्थ र महत्व हुन्छ ? कुन बाबुआमाले आफ्नो छोरी नराम्री भनेको सुन्न चाहन्छ र ? राम्रो बन्नुको र देखिनुको अर्थ नहुने भए किन आफ्नो कमाइको करिब पन्द्र प्रतिशत सृंगारमा लगाउँछन त महिलाहरुले ?
अर्को पुरक प्रश्न पनि गर्यो आफैलाई मन्जुलले । मैले किन केटालाई हेरिन त ? के मैले बिद्यार्थी बिद्यार्थी बीचमा बिभेद गरेँ ? तुरुन्तै उत्तर भेटायो अहँ गरेको छैन । केटाले केटालाई त्यसरी हेर्नु त नराम्रो हो । फेरि केटाको के नै राम्रो अनि हेरुँहेरुँ लाग्ने सुन्दर हुन्छ र ? जे हेर्यो भुत्ले, कडा, जर्खरिएको, बिझाउने, डस्ने, ददार्ने र दुखाउने ! फेरि मैले केटी हेरेको होइन त ! सुन्दरतालाई पो हेरेको हुँ त ।
आफूले कुनै नराम्रो काम नगरेकोमा पूर्ण बिस्वस्त भयो मन्जुल । त्यस पछिका अन्य थुप्रै दिनहरुमा अरु कक्षाका सिलु, सुमली, सब्रिना, अनु, बिजया आदिलाई पनि मजाले हेर्यो । हेरे जति सबैलाई एकसेएक सुन्दर पायो । तत्पशत त झन उसले सहकर्मी शिक्षिकाहरुलाई, आफ्नै परिवारका सदस्यलाई तथा बाटोघाटोमा भेटिने सबै नारीलाई गहन रुपमा हेर्न थाल्यो । जति गहिरिएर हेर्यो त्यति गहिरो ज्ञान हासिल गरिरह्यो । यो अलि पहिलेको कुरा हो । आजसम्म आईपुग्दा ऊ एउटा राम्रो अंग्रेजी शिक्षक तर प्रख्यात साहित्यकार, चित्रकार र मूर्तिकार भैसकेको छ । ऊ आफ्नो यो सफलताको सारा श्रेय निर्धक्कताका साथ महिला सुन्दरतालाई नै दिन्छ ।
8 thoughts on “कथा : कलाको विश्वविद्यालय”
Artistically written. घ्रेअत ! Loved to read.
राम्रोसंग लेखिएको रहेछ. पढ्दा मज्जा आयो.
धेरै समय पछि राम्रो साहित्य पढ्न पाइयो | फ्रेश भएँ | धन्यबाद माइसंसारलाइ अनि गौतमजीलाइ पनि |
धेरै राम्रो कथा. सभ्य. नारीको सम्मान. बिशाल साहित्य. धन्यबाद गौतम जि.
नारी सौन्दर्यताको सुन्दर कल्पना रहेछ कथामा । पढ्दा पढ्दै सकिएको पत्तै पाइन ।
यी हरफहरुले साहै्र मन छोए ।
“सुन्दर बस्तुमा सबैका आँखा पर्छन नै ! कहाँ भएका छन र कुरूपहरुका प्रतियोगिता ? कहाँ लेखिएका र गाइएका छन र असुन्दरहरुका गीत/गज़लहरु ? कुन चित्रकारले क्यानभासमा भरेको छ र नराम्राहरुका चित्र र मूर्तिहरु ? कुन चलचित्रमा छानिन्छन र नाराम्राहरु नायक र नायिकामा ?
मान्छे यात्रा गर्दा पनि प्राकृतिक रमणीय स्थल मै जान्छ नि, को जान्छ र मसानघाटको यात्रा गर्न, को जान्छ र बगर हेर्न ! कस्ले नराम्रो फूलको माला गाँस्छ ? कसले नराम्रो फूल वा खोटो बलि मन्दिरमा चढाउँछ र ? नदेख्ने, नहेर्ने हो भने सुन्दरताको भेद कसरी पाउन सकिन्छ त जीवनमा ? सुन्दरताको के अर्थ र महत्व हुन्छ ? कुन बाबुआमाले आफ्नो छोरी नराम्री भनेको सुन्न चाहन्छ र ? राम्रो बन्नुको र देखिनुको अर्थ नहुने भए किन आफ्नो कमाइको करिब पन्द्र प्रतिशत सृंगारमा लगाउँछन त महिलाहरुले ?”
धन्यवाद माइसंसारलाइ अनि धन्यवाद गौतम “उदय” लाइ । यति मिठो हरफहरुका लागी ।
लौन नेपाली बिषयमा त अब्बल नै छु जस्तो लाग्थ्यो तर केहि पनि बुझिन पढ्नै झ्याउ लागेर आयो मलाई त
खोइ बुज्नै गार्हो पर्यो हौ .. नेपालीमा सार्है कम्जोर छु कि जस्तो लाग्यो !!!!
खै मैले त केहि बुझिन , “उनको नाम स्वेता रहेछ ” भन्ने ठाउँ सम्म राम्रै बुझे | तेस्पछादी २ -३ पटक सम्म केहि बुझौन त भन्दा पनि बुझिन | लेखाईको कदर गर्छु गौतम जी तर लेखमा भनेको जस्तो यो कथा पनि सरल भासामा हुनुपर्ने होइन र ? कथाको बगाई भन्दा पनि साहित्य को मात्रा ज्यादा भएको जस्तो लाग्यो हो मलाई त |